Kuuriyada Waqooyi “oo gantaallo ridday” – hareerley News
Kuuriyada Waqooyi ayaa labo gantaal oo aanan oo aan noocooda la sheegin ku gantay badda, sida laga soo xigtay milatariga Kuuriyada Koofureed.
Kuuriyada Waqooyi ayaa bilihii dhawaa tijaabisay noocyo badan oo gantaallo ridadoodu gaaban tahay ah. Haddii kuwan la xaqiijiyana waxay noqon doonaa tijaabadii tobnaad tan iyo bishii May.
Waxay sheegtay in kulankaas la qaban doono marka ay labada dhinac ku heshiiyaan wakhtiga iyo goobta lagu qaban dooono. Si kastaba ha ahaatee Kuuriyada Waqooyi ayaa Maraykanka u digtay, waxayna sheegtay in loo baahan yahay in lala yimaaddo qorshe ka gadisan midkii hore haddii aan sidaa la yeelinna ay wadahadalladu dhicisoobi doonaan sidii kuwii ka hore..
Natiijada horudhac ah oo laga helayo doorashada dalka Canada ayaa muujineysa in xisbiga Liberal-ka ee ra’iisul wasaaraha dalka Canada uu markale ku guuleystay awoodda dalkaas. Inkastoo uu guuleystay Justin Trudeau ayaa haddana waxaa la sheegayaa in uusan helin kuraastii loo bahnaa ee aqalka barlamaanka, taas oo ku qasbi doonta in uu kaashakdo axsaabta kale ee […]
Khilaaf ka jira Soomaliland kaas Oo ku aadan ka qeyb-galka caleemo saarka Axmed Madoobe
Xildhibaan Naasir Xaaji Cali oo ka mid ah baarlamaanka Somaliland ayaa sheegay in isaga iyo xubno kale oo isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano ka qeybgali doonaan caleema saarka Hogaamiyaha isaga isdoortey ee Jubbaland, Axmed Madoobe. Wuxuu sheegay xildhibaanka in ay la dhaceen qaabkii ay u dhacday doorashada Jubbaland ,sidaasi darteedna ku dhiirogelisay in ay caleema […]
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya Amb, Nicolas Berlanga ayaa walaac xoogan waxaa uu ka muujiyay natiijada la dhalan karta hadii dib u dhac uu ku yimaada doorashada Soomaaliya. Farriin qoraal ah oo uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka ayaa waxaa uu ku sheegay in ay ka walaacsan yihiin natiijada aan fiicanayn ee ka dhalan karta dib […]